Ny boky tsara indrindra ankehitriny
Boky miresaka lohahevitra ankehitriny
Ny fahafatesan'ny sapiens iray tamin'ny Neanderthal
Tsy ny zava-drehetra dia ho toy ny mofo jamba amin'ny fiainana. Satria ao amin'ny teny filamatra mifehy ny zava-drehetra, io foto-kevitra milaza ny fisian'ny zavatra io dia mifototra amin'ny sanda mifanohitra amin'izy ireo fotsiny, ny fiainana sy ny fahafatesana no mandrafitra ny rafitra tena ilaina eo amin'ny fara-tampony. Ary ny antony...
Ny Tanànan'ny Velona, ​​nataon'i Nicola Lagioia
Fandevenana mpifanolo-bodirindrina tsy nampoizina. Dokotera Jekyll izay mety mbola tsy mahafantatra fa Mr Hyde izy ireo. Ary rehefa misy izy ireo dia tsy hoe nisy fiovana. Izany dia noho ilay fitenenana taloha izay mety hampijoro ny hoditrao hoe “Olona aho ary tsy misy olona vahiny amiko”, satria…
Eo ambanin'ny fijerin'ilay dragona mifoha, nataon'i Mavi Doñate
Ny maha-mpanao gazety dia manamarina ny hevitra rehetra amin'ny fiheverana ny tenanao ho olona nandeha. Satria ny fitantarana ny zava-mitranga na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy manana izany fahalalana fototra izany mba hampitana ny zava-mitranga amin'ny fahatokisana. Ny vokatr'izany dia mety ho, toy ny amin'ity tranga ity, ...
Haunting Valley, nataon'i Anna Wiener
Samy niandrandra an'io andian-jiolahim-boto io sy geek hafa avy any Silicon Valley izahay rehetra. Vondron-janaka ray iray izay nanambara rafitra ara-toekarena vaovao ho tombontsoan'ny rehetra ary miompana amin'ny fiarahamonina fifanampiana. Ny mangiran'ny tontolon'ny teknolojia vaovao miaraka amin'ny tombony be voninahitra ...
Ireo tsatòka, nataon'i Philipp Blom
Ny fampiasana ny teny hoe "lalao" dia maneho mazava ny fahitan'ity tontolo misy antsika ity ho zavatra tsy tena izy tanteraka. Satria lalao ny zava-drehetra, dia mponina tsy maharitra amin'ity toerana ity isika ary noho izany dia tsy afaka mandray am-pahamatorana zava-dehibe tokoa isika. Mampalahelo fa ny etimolojia an'ny ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny loza voajanahary, nataon'i Bill Gates
Tsy ela no nandrosoan'ny vaovao, na dia amin'ny sehatry ny fanatanjahantena aza (indrindra ho an'ny mpankafy Real Zaragoza). Ary, eo koa ny hatsikana, ny olan'ny fanatontoloana, ny fiovan'ny toetr'andro nolavin'ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Rajoy, ary ity coronavirus miovaova mahafaly ...
Lohataona Extremadura, nataon'i Julio Llamazares
Misy mpanoratra izay manana tranga hafa ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, lava hafa lava ny halavany izay ahatongavan'ny fahatsapana sy fiheverana mifamatra matetika tonga amintsika. Julio Llamazares dia avy amin'ny lapan'ny mpitati-baovao izay nahavita niatrika zava-misy ara-bakiteny vantany vao nanaparitaka antsika ...
Ny fiainana nolazain'ny ombyens tamin'i Neanderthal, nataon'i Juan José Millas
Amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra no hitantarana ny fiainana ... Satria ny zavatra iray dia ny manintona ny sambo-dranomasina ho mpifanerasera ratsy indrindra noho ny hadalàn'ny masony foana, ary ny zavatra iray hafa dia ny fihaonantsika amin'ny lehilahy roa, mifikitra. vonona hiresaka momba ny finiteness ...
Avy tao amin'ny Lazarillo de Tormes izahay dia tsy nahita boky tsy fantatra anarana izay liana bebe kokoa noho ity iray ity. Satria ny zava-misy dia ampifanarahana amin'ny toe-javatra manerantany izay ananantsika rehetra manana fatotra piiiiii (na atody na ovary). Miaraka amin'ny areti-mifindra amin'ny ambaratonga rehetra, efatra ...
pejy1 pejy2 ... pejy6 manaraka →